Kunamata Zvimiro ZveMwoyo Wakaputsika | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Points YeMwoyo Wakaputsika
Kunamata Points YeMwoyo Wakaputsika
Nhasi tichange tichitarisana neminamato mapoinzi emoyo wakaputsika. Paunonzwa izwi rakaputsika moyo, chii chinouya mupfungwa? Pasina kupokana, tarisiro dzakakwirira ndicho chete chikonzero che kusagadzikana. Zvichakadaro, kusagadzikana ndicho chimwe chechikonzero chikuru chekuputsika kwemoyo kungave muhukama kana hupenyu. Zvakare, kurasikirwa kweumwe munhu kunogona kukonzera moyo wakaputsika.
In Naijeriya parizvino, kushushikana kwave kuita kwezuva nezuva. Isu tinokasira kutonga munhu akazviuraya, nekuda kwekuti tinonzwa kuti hapana chakashata chingakonzere kuti murume atore hupenyu hwake. Ipo, kana aan akaora mwoyo, hapana chinhu nezve hupenyu chinonzwisisika. Mwoyo wakaputsika chimiro chekushushikana kwepfungwa uye kurwadziwa. Muzviitiko zvakawanda, kana ikasabatwa zvakanaka, inogona kudzikira mukushungurudzika kwepfungwa kunotungamira mukuora mwoyo.
Ngatitorei nhoroondo yaJudhasi Iskarioti muBhaibheri. Zvakaitwa naJudas zvoda kufanana neyaMupostora Peter. Panguva iyo Judha yairatidza Kristu kune vakamurwisa, Mupositora Petro akaramba Jesu paakamuda zvakanyanya. Idzi ndidzo nyaya dzekutengesa kuvimba. Jesu aigona kuve akarwadziwa pamoyo kuti akatengeswa nevanhu vake chaivo. Mupostori Petro akakwanisa kukurisa kunzwa kwake kwekuzvipa mhosva nekutsvaga kumeso kwaMwari kuti aregererwe.
Judhasi kune rimwe divi akakundwa nemhosva izvo zvakakonzera kuora mwoyo uye pakupedzisira akazotora hupenyu hwake. Mwoyo wakaputsika inongova nhanho kubva pakuora mwoyo. Uye munhu akaora mwoyo anogona kuita chero chinhu.
Mhedzisiro yeMwoyo Wakaputsika
Kuti isu tinzwisise kukosha kwemunamato uyu, ngatikurumidze kusimbisa zvimwe zvezvinhu zvingaitike kune chero munhu anotambura nemoyo wakaputsika.
Zvinonzwa Mwari Ari Kure Newe
Kana iwe wanyudzwa nekunzwa kwekurwadziwa uye kushushikana, dzimwe nguva unonzwa kuti Mwari haasi mune zvakadaro padyo newe uye rubatsiro harwuuye. Judhasi Iskarioti akazadzwa nemarwadzo. Kuda mari kunodarika kuvimbika kwake kuna Kristu Jesu. Akave nemoyo wakaputsika mushure mekunge Jesu atorwa uye akange ave kuda kuurawa. Zvinokwanisika kuti aisaziva kuti mhondi dzaida Jesu kuitira kuti vamuuraye.
Mushure mekunge Judhasi aziva mugumisiro wezvaakaita. Haana kukwanisa kukumbira ruregerero kuna Mwari. Akanzwa kuvepo uye tsitsi dzaMwari zvaive kure naye, akapinda mukuora mwoyo uye pakupedzisira, akazviuraya. Kana isu takaputsika nemoyo, dzimwe nguva tinorasikirwa nekutenda muna Mwari. Semuenzaniso, kana isu tikarasikirwa nemumwe munhu akakosha kwazvo kwatiri. Tinopomera Mwari nekutendera zvakaipa zvakadaro kuti zviitike kwatiri. Kana hanya ikasatorwa, moyo wakaputsika unogona kudhonzera munhu kure zvachose pamberi paMwari.
Inotungamira Kuora Mwoyo
Ichi ndicho chimwe chezvinhu zvakajairika pamwoyo wakaputsika. Kushungurudzika kwakaipa mamiriro epfungwa uko pasina chinhu chakakosha, kunyangwe hupenyu. Munhu akaora mwoyo anozviparadzanisa nevanhu kubva kune veruzhinji. Dzimwe nguva vanokudziridza hunhu hwakatsauka kuvavakidzani vavo.
Kana zvinhu zvese izvi zvikaitika, kushushikana kwakapinda mukati. Zvinotora nyasha dzaMwari uye nemazano akati wandei kuti ubude mukutambudzika.
Inotungamira kuHutano Matambudziko
Kana iwe wakambonzwa nezvevanhu kufa zvisingatarisirwi, kazhinji zvinokonzerwa nekufungisisa. Kazhinji pane zvisiri izvo, tinopomera dhiabhori nekuda kwekufa kwevanhu. Ipo, isu hatizive kuti munhu akadaro anga achirera moyo wakaputsika kwenguva refu.
Kutsvagurudza kwakaratidza kuti kana murume achifunga zvakawandisa, anova panjodzi yehutano hwakaomarara hunogona kutungamira kurufu.
Maitiro Ekurapa Akaputsika Mwoyo
Kana tichiverenga rugwaro, tinozonzwisisa kuti rudo rwaMwari rwakakwana zvakakwana kurapa maronda ese. Rugwaro runoti Uye uve nesimba rekunzwisisa, sevanhu vese vaMwari, kuti yakafara sei, yakareba sei, yakareba sei, uye yakadzika sei rudo Rwake. Dai iwe uchisangana nerudo rwaKristu, kunyangwe iri rwakanyanya kukura kuti unzwisise zvizere. Ipapo unozadziswa nekuzara kwehupenyu nesimba rinobva kuna Mwari. (VaEfeso 3: 18-19) Rudo rwaMwari harugone kuyerwa.
Rubatsiro rweMweya Mutsvene Munyaradzi
Jesu haana kungodaidza mweya mutsvene kuti munyaradzi nekuda kwekunakidzwa nawo mubhuku ra Johane 14: 16 Uye ini ndichanyengetera kuna Baba, vagokupaiwo mumwe Munyaradzi, kuti agare nemwi nekusingaperi. Mweya waMwari unonyaradza unorapa ronda redu nekugadzirisa moyo yedu yakaputsika.
Mweya waMwari unotipa simba rekuchengetedza tariro iri mhenyu kusvikira rubatsiro rwasvika.
Ndinoraira netsitsi dzashe, mafomu ese emoyo wakaputsika apora nhasi muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamatira murume wese nemukadzi vane moyo wakaputsika nekusaora, ndinonamata kuti muporese moyo yavo yakaputsika nesimba renyu.
Tenzi, kumurume wese nemukadzi vane moyo wakaputsika nekurasikirwa neumwe munhu akakosha kwazvo kwavari, ndinonamatira kupodzwa kunoshamisa nhasi muzita raJesu.
Ishe, ndinonamatira kune wese anotambura nekurwadziwa pamoyo, ndinonamata kuti muvape simba rekuchengetedza tariro iri mupenyu muzita raJesu. Nyasha dzekuti vasarasikirwe netariro mamuri, nyasha dzekuti vasatsauswe nekushushikana, ndinonamata kuti muvape muzita raJesu.
Baba Tenzi, kune wese munhu akarasikirwa nekutenda muhupenyu. Kune wese munhu asingaone chero kukosha kwekuramba achirarama. Ndinonamata kuti netsitsi dzenyu, muzorega rudo rwenyu ruzadze moyo yavo muzita raJesu.
Baba, ndinonamatira vanhu vakasangana nekurambwa, ndinonamatira vanhu vane moyo yakaputsika nekuda kwekusuwa, ndinonamata kuti nyasha dzenyu dzivawane nhasi muzita raJesu.
Ishe, zvioneke kune avo vanoda kukuwana iwe, rega avo vanoda rudo rwako vauwane, vape tariro kune vanhu vane tariro yaparara, muzita raJesu.
Ndinonamata kuti iwe uvhare munzira dzese idzo muvengi akaronga kukuvadza vanhu. Munzvimbo dzese dzakaiswa nemuvengi musungo wekupwanya moyo, ndinonamata kuti muvatore muzita raJesu.
Previous nyayaMunamato Pfungwa Kune Vanotambura
inoteveraMinyengetero Yenzvimbo yechiKristu
Minamato Yeiyo Pfungwa dzakavhiringidzika